Sihlalo wokutya, isofa, Itafile yokutya, uSihlalo wePlastiki, uSihlalo wePu-uForman
Tianjin Forman Furniture yi mveliso phambili phakathi emantla China leyo yasekwa ngo-1988 ikakhulu ngokubonelela izitulo zokutyela kunye neetafile.
Ulwabiwo lwentengiso ngama-40% eYurophu, 30% e-USA, 15% eMzantsi Melika, 10% eAsia, 5% kwamanye amazwe.
IForman ineqela elikhulu lokuthengisa elinabathengisi abaziingcali abangaphezulu kwe-10, elidibanisa indlela yokuthengisa ekwi-Intanethi nakwiintanethi, kwaye ihlala ibonisa ..
Sihlalo wabantwana 1720-abantwana #
Uyilo ngumphefumlo weSihlalo sePlastiki. Isihlalo senziwe ngezinto ezinobungakanani bendalo ezinobume bendawo. Esi sihlalo sihlala sisetyenziselwa ngaphakathi, sinokusetyenziswa kwangaphandle ngezinto ze-UV kunye nokuhonjiswa komgubo wangaphandle. Njengoko ubhetyebhetye luphawu lweplastiki ye-PP, uyakufumanisa kulungile ukuhlala.
Isitulo sabantwana i-1719-yaBantwana #
Isitulo sokutyela siphefumlelwe ngumhlaba ngokwawo, esi sihlalo sinjengesebe songeza into ezolileyo kuyo nayiphi na indawo. Isihlalo sayo esomeleleyo seplastikhi sibonisa uyilo lokusika uqalo lomoya opholileyo wale mihla, olungele ikhitshi, iofisi, okanye ipatio.
Sihlalo wabantwana 1619-abantwana #
Usihlalo wenziwe ngesinyithi nangomthi, isakhelo sayo ngababini semilenze ejikelezileyo edityaniswe ngenkxaso yokuqhekeza ngemilenze ejikelezileyo. Isitulo sebhakethi seplastikhi siyayidibanisa, sibonisa umbala oqinileyo. Isihlalo sengalo senziwe ngezinto ezinobungqingili ezinobungqingili bendalo. Njengoko ubhetyebhetye luphawu lweplastiki ye-PP, uyakufumanisa kulungile ukuhlala.
Izitulo zeentsana, uSihlalo omncinci 1618-abantwana #
Isihlalo se-ergonomic sinesakhiwo esenziwe ngasemva ukuze sithuthuzele ngokugqibeleleyo.Isihlalo senziwe ngezinto ezinobungqingili ezinobungqongileyo kunye nemilenze eyenziwe ngokhuni oluqinileyo. Iplastiki ye-PP, uyakufumana kulungile ukuhlala.
Itafile yokutyela T-55 #
Le tafile yokutyela yinto yomqokeleli kunye nokusetyenziswa okungafaniyo kwiindawo ezahlukeneyo, nokuba kusekhaya okanye eofisini, nangaphandle. Inika indawo eninzi yendawo yekhofi kunye nexesha leti, ukufunda emva kwemini, ukusebenza, ukubonisa i-vase yakho oyithandayo kunye nezityalo, kunye nokubeka eceleni ulawulo lwakho olukude.
iglasi yomsindo phezulu ilitye lomlilo ilitye lemabhile ...
Itafile yemarble iyahambelana neentsapho ezincinci kuba ziyakwazi ukumelana nommiselo osebenzayo, ungabonakalisi lula kumdaka kwaye akukho manzi anokuyonakalisa itafile njengokhuni. Itafile yokutya umkhenkce kulula ngokwakhiwa kwekristale yelitye kwaye kwinkqubo, itafile ipolishiwe kwaye isetyenziselwa ukugubungela umsebenzi onxamnye nongcoliseko, ukucoca ngokukhawuleza kunangaphambili. Itafile ecace gca itafile eyilelwe ngemisebenzi emininzi, enokuba itafile, itafile yeti okanye itafile, ukuze kuziswe ...
Itafile yokutya T-15
Itafile yokutya ephezulu ejikeleze ngokukodwa eyenzelwe iintsapho ezincinci iya kunika indlu yakho imbonakalo yeklasikhi. Oku kwenza nje ukuba itafile yokutyela ibambe abantu abane ngenxa yobungakanani bayo obuncinci kodwa yile nto iyenza ikhetheke kwaye ibambe iliso lokwenyani. Itafile ejikelezayo izisa abantu kufutshane ukuze ungaphoswa lithuba lokuchitha awona maxesha amnandi nosapho okanye izihlobo. Yenziwe nge-MDF yomelele kwaye yawela imilenze yesinyithi kunye neepads phantsi kwento nganye ukukhusela umgangatho wakho ekukrwemeni, ungafumana ...
Itafile yokutya T-15L
I-T-15L: Imijikelezo ejikeleziweyo yokhuselo lokhuseleko, i-MDF imathiriyeli eyomeleleyo yedesktop, uyilo oluhle.
Sihlalo wePlastiki 1666-abantwana #
Uyilo ngumphefumlo weSihlalo sePlastiki. Isihlalo senziwe ngezinto ezinobungqingili ezinobungqongileyo obunobume bendalo, isakhelo somlenze wesinyithi sinokuba ngumgubo ogqityiweyo okanye udluliselwe ngomthi. Esi sihlalo sihlala sisetyenziselwa ngaphakathi, sinokusetyenziswa kwangaphandle ngezinto ze-UV kunye nokuhonjiswa komgubo wangaphandle. Njengoko ubhetyebhetye luphawu lweplastiki ye-PP, uyakufumanisa kulungile ukuhlala.
Sihlalo wePlastiki - F803 #
Isihlalo esitofotofo kunye nesiseko esomeleleyo senza esi sihlalo seplastiki songezwe kwisitayile kwigumbi lokutyela, kwigumbi lokuhlala, okanye ekhitshini. Usihlalo ongekho phantsi ubonelela ngenkxaso eninzi ngeqokobhe lakhe elinzulu kunye nendawo yokubeka iingalo eziphakamileyo. Imilenze iyolulwa yenze isiseko esibanzi, siphucula uzinzo losihlalo kunye nokwenza ukujonga okulinganayo, okulinganayo.
Sihlalo seplastikhi-BV #
Ngokubhekisele kwesi sihlalo seplastiki, lonke ulwakhiwo lweKD yindawo ekhanyayo, iphakheji encinci kakhulu elungele ukuthengiswa kwi-Intanethi. Usihlalo wenziwe ngazo zonke izinto ezinobungakanani bendalo ezinobume bendawo, kunye noyilo lwayo lwantlandlolo, oluhle, olungenakuqatshelwa kunye nokukhetha imibala kwireferensi yakho.
Sihlalo wePlastiki yeBar- 1780 #
Uyilo ngumphefumlo weSihlalo sePlastiki. Isitulo sebar senziwe ngezinto ezinobungqingili ezinobungqongileyo obunobume bendalo. Ukhetho olunemibala kukhetho lwakho. Esi sihlalo sebar sihlala sisetyenziselwa ngaphakathi, sinokusetyenziswa kwangaphandle. Njengoko ubhetyebhetye luphawu lweplastiki ye-PP, uyakufumanisa kulungile ukuhlala.
Sihlalo wePlastiki 1681 #
Uyilo ngumphefumlo weSihlalo sePlastiki. Ukubonelela ngezihlalo zangoku kwitheko okanye umsitho oqhelekileyo ngezi zitulo. Ilungele ukutya ngaphakathi okanye ukusetyenziswa kwangaphandle, ezi zitulo zihlala zikhona ngokugcina ngokukhawuleza kunye nokuhambisa. Isihlalo senziwe ngezinto ezinobungqingili ezinobungqongileyo obunobume bendalo, isakhelo somlenze wesinyithi sinokuba ngumgubo ogqityiweyo okanye udluliselwe ngomthi. Ukhetho olunemibala kukhetho lwakho. Esi sihlalo siqhele ukusetyenziswa kwangaphakathi, sinokusetyenziswa kwangaphandle kunye nezinto ezingafunekiyo ze-UV kunye nokwaleka komgubo wangaphandle ...
Isofa F813 #
IForman ngumzi mveliso okhokelayo osoloko ujolise kuyilo loyilo. Ncoma kakhulu le seti yesofa, kukhululekile ukuhlala okanye ukulala kumqamelo othambileyo. Idityaniswe nomqamelo kunye neplastiki ye-PP, izele yimvakalelo yefashoni kwaye yomelele ngokwaneleyo ukuba ixhase ubuncinci be-150kgs umthwalo. Ungayifaka kwigumbi lakho lokuhlala ukonwabele ubomi bakho obumnandi! nawuphi na umbala uyafumaneka, ulinde umbuzo wakho!
Izitulo zokutya zeplastiki Shelly #
Uyilo ngumphefumlo weSihlalo sePlastiki. Njengoko ubhetyebhetye luphawu lweplastiki ye-PP, uyakufumanisa kukhululekile ukuhlala.isihlalo sangokuhlwa esimnandi kunye nesangoku sokudlela esincoma zombini iindawo zokutyela zangaphakathi nangaphandle. Eyilwe ngesitayile sokuhamba esimahla, esidibanisa izinto ezisisiseko zoyilo lwangoku kunye nesihlalo esinobunkunkqele kunye nendawo yokubuyela umva ngobuchule yokuma kakuhle. ingqokelela ngokupheleleyo, iza ngokudibeneyo, kwaye ifakwe ngaphandle kwe-m ...
Ihowuliseyili Multi-indawo ukufumaneka zeplastiki chai ...
Singumenzi onamava. Wining uninzi lwezatifikethi ezibalulekileyo kwimakethi yazo yeFektri ngokuthe ngqo yokubonelela ngeNdlela yeSihlalo seChina ...
Iivenkile zokutyela zaseDenver zenza ubuchule kunye n ...
Inkampani edumileyo yoyilo lwefanitshala evela e-China
Sebenzisa uqalo yindlela entle yokuhombisa ikhaya lakho
Namhlanje zininzi iindlela zokuhombisa ikhaya ngefenitshala engaqhelekanga yoyilo olwahlukileyo. Nokuba ukhetha ukuhonjiswa kweAsia okanye iNtshona, unokuba phakathi ...
UKUFUNDA SIMAHLA 0086-18630605237
IDILESI Shengfang Town, Bazhou City, kwiPhondo Hebei, China